The MYAWADY Daily: September 2016
တစ်နေ့ နံနက် သူဖုန်းဆက် လာသည်မှာ သူ ညကပူ၍ အဲယားကွန်း ဖွင့်အိပ်ရာမှ ဆောင်းဝင်လာ သဖြင့် ညဉ့်နက်ပိုင်းတွင် ရုတ်တရက် အေးလာပြီး အအေးပတ် သလိုဖြစ်ကာ နံနက် အိပ်ရာထတွင် အကြောအခြင်များ တောင့်တင်းသလို ထုံနေသလို ဖြစ်သဖြင့် ဖုန်းဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးဉာဏ်အောင်က- ''အခု ဆောင်းဝင်စမှာ ညဉ့်ဦးပိုင်း သိပ်မအေးဘဲ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်မှာ အေးလာတယ်ဆရာ။ ညဉ့်ဦးပိုင်းမှာ ပူတော့ အဲယားကွန်းဖွင့် အိပ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ညဉ့်လယ်မှာ အအေးပတ်မှ စိုးတယ်။ မဖွင့်ဘဲ အိပ်ပြန် တော့လည်း တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်ဘူး။ လေဖြတ်တာနဲ့ အဲယားကွန်းနဲ့ ဆက်စပ်မှု ရှိ-မရှိ သိချင်ပါတယ်" ဟု ဆိုလာသည်။
''အဲယားကွန်း ဖွင့်အိပ်လို့ လေဖြတ်တယ် ဆိုတာ အထောက်အထား မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း နွေ၊ မိုး၊ ဆောင်း သုံးရာသီလုံး အဲယားကွန်း ဖွင့်အိပ်ပါတယ်။ မဖွင့်ရင်လည်း မရပါဘူး။ ကျွန်တော့် တိုက်ခန်းက အလုံခန်းပုံစံ ဖြစ်နေလို့ပါ။ မီးမလာရင် ဒုက္ခရောက် ပါတယ်။ အပြင်ထွက်အိပ် ရပါတယ်။ ဦးဉာဏ်အောင် လည်း ကျွန်တော့်အိမ် ရောက်ဖူးတာပဲ " ဟု ပြန်ဖြေ လိုက်ရသည်။
''မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ခရီးထွက်လို့ ဟိုတယ်မှာ နှစ်ယောက် တစ်ခန်း တည်းခိုတဲ့ အခါ ကျွန်တော်က အေးအေးစိမ့်စိမ့် လေး နေရတာကို ကြိုက်တဲ့ အတွက် အဲယားကွန်း ဖွင့်ပါတယ်။ ဖွင့်တယ် ဆိုပေမယ့်လည်း တအား အေးစိမ့်နေ အောင်တော မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအခါ ကျရင် မိတ်ဆွေက ခင်ဗျား အအေးသိပ်ကြိုက် တာပဲ။ အဲယားကွန်းက လေဖြတ် တတ်တယ် " လို့ ဆိုလာပါတယ်။ ဒါကိုကျွန်တော်က သဘောမတွေ့ ပါဘူး။ လက်မခံ ပါဘူး။ အဲယားကွန်း ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ ကမ္ဘာ့လူနေမှုစနစ်မှာ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲနေတာပါ။ အဲယားကွန်း ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုမိုများပြား လာပြီး လူနေမှုစနစ် တွေမှာ ပိုမိုသုံးစွဲ လာတာကိုသာ တွေ့ရပါတယ်။ လေ့လာဆန်းစစ်မှု သုတေသန အားကောင်းတဲ့ အနောက်နိုင်ငံ တွေက ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီဘူးဆို တာကို မသိဘဲနဲ့ မနေပါဘူး။ ရောဂါ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီဘူးဆိုရင် ဘာကြောင့် လူနေမှုစနစ် မှာ ပိုပိုပြီးတော့ သုံးစွဲလာရသလဲ။ အဲဒါ အဲယားကွန်း နဲ့ လေဖြတ်နိုင်မှု ဆက်စပ်တာကို ရိုးရာ တိုင်းရင်းဆေး ရှုထောင့်က ပြောပြပေးပါ''လို့ ဦးဉာဏ်အောင် က ဆိုလာပြန်သည်။
သို့ဖြင့် အဲယားကွန်း အသုံးပြုခြင်းသည် ကျန်းမာရေး နှင့် ညီညွတ်ခြင်း ရှိ-မရှိကို ကျန်းမာရေး ရှုထောင့်မှ တင်ပြရန် လိုအပ်လာပြီ ဟု ထင်မြင်မိသဖြင့် အဲယားကွန်း နှင့် ကျန်းမာရေး ဆက်စပ်မှုကို ရေးသား လိုက်ရပါသည်။ များသောအားဖြင့် အိပ်ခန်း ကလည်း လေမဝင်နိုင်တဲ့ နေရာမျိုးဖြစ်၊ ပန်ကာ လေပူကြီး ကိုလည်းမကြိုက်၊ ငွေကြေးလည်း တတ်နိုင်လျှင် အိမ်များ၏ အိပ်ခန်း များတွင် အဲယားကွန်း တပ်ဆင်လေ့ ရှိပါသည်။ တချို့ကတော့ အဲယားကွန်း ဆိုတာကို ဇိမ်ခံပစ္စည်း အနေနဲ့ပဲ မြင်လေ့ ရှိပါသည်။
အဲယားကွန်း သည် အခန်းအပူချိန် ကို လျှော့ချရန်နှင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ် အပူ ၊ အအေးကို ထိန်းညှိပေး နိုင်ရန်အတွက် သိပ္ပံပညာရှင်နှင့် အီလက်ထရွန်နစ် အင်ဂျင်နီယာများ ပူးပေါင်းတီထွင် ထားသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ လူသား အကျိုးအတွက် တီထွင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဇိမ်ခံပစ္စည်း မဟုတ်ပါ။ ဇိမ်ခံပစ္စည်းဟု ထင်လျှင် မှားပါလိမ့်မည်။ ခေတ်မီ တိုးတက်မှုနှင့် အညီ လူသားများ၏ ယဉ်ကျေးမှု အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများ သည်လည်း ယခင်ခေတ် ကာလများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် တိုးတက် များပြားလာသည်။
လူနေမှုဘဝအတွင်း ပို၍ သက်သောင့် သက်သာ အဆင်ပြေပြေ နေနိုင်စေရန် အသုံးပြုရမည့် လူသုံးပစ္စည်း များကို တီထွင်ကြံဆ ထုတ်လုပ်လာ ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ခေတ် အဲယားကွန်း ၊ ရေခဲသေတ္တာ ၊ တီဗွီ ၊ ဟန်းဖုန်း တို့သည် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ မဟုတ်တော့ဘဲ အခြေခံ လူသုံးပစ္စည်းများ ဖြစ်လို့လာပါပြီ။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ လူနေမှုစနစ်တွင် သက်သောင့် သက်သာ နေထိုင်နိုင်အောင် ပညာရှင်များ တီထွင် ထုတ်လုပ် လိုက်သော အဲယားကွန်းသ ည် ပြောင်းလဲ လာသော ရာသီဥတု ၊ သဘာဝနှင့် လူသားများ နေထိုင်မှုတွင် အပူ၊ အအေးကို မျှတအောင် ထိန်းညှိပေးရာ တွင် အသုံးပြုသော ပစ္စည်းအဖြစ် လိုအပ် လာသည်။
သို့သော် ညဉ့်အချိန် အဲယားကွန်း ဖွင့်၍ အိပ်စက်ပါက သတိပြုရမည့် အချက်များ ရှိနေသည်။ အဲယားကွန်း သည် သုံးတတ်လျှင် မိတ်ဆွေ၊ မသုံးတတ်လျှင် ရန်သူဟု ပြောလေ့ရှိသော မီးကဲ့သို့ ပစ္စည်းမျိုး ဖြစ်သည်။ အဲယားကွန်း ဆိုသည်မှာ အအေး ထုတ်လွှတ်သော ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း လူတိုင်းသိထားပြီး ဖြစ်သည်။ အဲယားကွန်း တွင် ပန်ကာလည်း ပါပါသည်။ ပန်ကာလေ၏ သဘော သဘာဝမှာ လူသားများ၏ ချွေးထွက်မည့် မွှေးညင်းပေါက်လေး များကို ကျုံ့စေသော သတ္တိ ရှိသဖြင့် လူနှင့်မတည့်ပါ။ အဲယားကွန်း ၏ Fan ဆိုသော အလုပ်ကို အမြင်ဆုံး (High) မှာ မထားသင့်ပါ။ တစ်ညလုံး ဖွင့်မည် ဆိုလျှင် အနိမ့် (Low) မှာသာထား၍ အိပ်စက်သင့်သည်။
အဲယားကွန်းဖွင့်၍ အိပ်စက်သော အခါ အခန်းတွင် ထားရှိရမည့် အအေးဒီဂရီ (စင်တီဂရိတ်) သည် အခန်းအကျယ် အဝန်းအပေါ် တွင် မူတည် ပါလိမ့်မည်။ တချို့ အခန်းကြီး များသည် ကျယ်ဝန်းသဖြင့် 16' C ၊ 18' C ထားသော်လည်း သိပ်မအေးတတ် သည်ကို တွေ့ရပါမည်။ သို့သော် ၁၀ ပေပတ်လည် အခန်း အကျယ်အ၀န်း ဆိုလျှင်မူ 25' C ၀န်းကျင်လောက် သာထားလျှင် ပို၍ ကောင်းပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အို လူကြီးများ ဖြစ်ပါမူ 25'C မှ 30' C အတွင်းကြားတွင် ထားပါက ကောင်းမွန် သင့်လျော်သည်။ ရေငွေ့ အထွက်များလျှင် လူကြီးများ၏ အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းတွင် ပြဿနာ ပေါ်တတ်ပြီး ချွဲပိတ်တတ်သည်။
ထို့ပြင် အဲယားကွန်းနှင့် ပန်ကာ ကွာခြားမှု ရှိသည်။ ပန်ကာကို ရင်ဘတ်တည့်တည့် ဖွင့်အိမ်သဖြင့် လေဖြတ်သွားသည့် သူများလည်း ရှိသည်။ ပန်ကာလေ ကြောင့် လေဖြတ်နိုင်သည် ဆိုပြီး ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်က သတင်းစာမှာ ကျွန်တော် ဆောင်းပါးရေးဖူး သည်။ အသက် ၄၅ နှစ်ခန့် အရွယ် မိတ်ဆွေတစ်ဦး ၏ အဖြစ်အပျက် ကို အခြေခံ၍ ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ပန်ကာကို အိမ်ရာဘေးတွင် ကပ်ဖွင့်ပြီး အိပ်သဖြင့် ချွဲကျပ်သေဆုံး သွားသော လူငယ်တစ်ဦးနှင့် အင်္ကျီချွတ်လျက် ပန်ကာဖွင့်အိပ်ပြီး နံနက်ခင်း ရောက်သောအခါ သေဆုံးနေသော အသက် ၄၀ ခန့်လူလတ်ပိုင်း တစ်ဦးကိုလည်း တွေ့ဖူးကြုံဖူး သည်။ ပန်ကာက လေကို တိုက်ရိုက်မှုတ် ပေးသည်။ ပန်ကာလေ လာလျှင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်နေသော အခိုးကို ငုပ်စေပြီး Stoma ဟု ခေါ်သော မွေးညင်းပေါက် ကလေးများကို ပိတ်သွား စေသည်။ ပတ်ချာလည် နေသော ပန်ကာကို ဝေးဝေးတွင် ထား၍ ဖွင့်အိပ်လျှင် တော့ ဘာမှ မဖြစ်နိုင်ပါ။ အနားတွင် ကပ်ထားပြီး ဖွင့်၍ မအိပ်သင့်ပါ။ ခြင်၊ ယင် မလာရုံ လောက်တော့ ဖွင့်လျှင် ဖွင့်နိုင်သည်။ အိပ်ပြီး နံနက်ထ လာလျှင် ပန်ကာကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံး ညောင်းနေတတ် သည်။ နေ့လယ် နေ့ခင်းတွင် မျက်နှာကြက် ပန်ကာအောက်မှာ ထိုင်၍ အလုပ်လုပ်လေ့ ရှိသူများသည် ဆံပင်ကျွတ်ပြီး ထိပ်ပြောင် လွယ်တတ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ထို့ပြင် အဲယားကွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ တခြားသတိထား သင့်သည်များလည်း ရှိသေးသည်။ တချို့သည် အခန်းထဲ မရောက်မီ အဲယားကွန်းကို ကြိုတင် ဖွင့်ခိုင်းထား တတ်သည်။ ယင်းသို့ ဖွင့်ထားသော အခါ ကြာလာလျှင် အတွင်းတွင်းမှာ အအေးဓာတ်များ နေတတ်သည်။ 16'C လောက်ရှိနေ သည် ဆိုပါစို့။ အပြင်အပူထဲမှ လာသော သူက 16'C ခန့်ရှိသော အခန်းထဲသို့ ၀င်ရောက်လာ ပါက ခန္ဓာကိုယ် ၏ ရုတ်တရက် တုံ့ပြန်မှုကြောင့် ဦးနှောက်ထဲက သွေးကြောငယ် လေးများ ပေါက်သွား တတ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြင်ပအပူချိန်နှင့် အတွင်း အပူချိန်တွေ ခြားနားချက် 15' C ရှိလျှင် လေဖြတ်တတ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
အိပ်ခန်းအတွင်း အဲယားကွန်းကို တပ်ဆင်ရာတွင် အနေအထား မှန်ရန်လည်း လိုအပ်သည်။ အိပ်ခန်း ဖွံ့ည်းစည်းပုံ တော်တော်များများ တွင် အဲယားကွန်း ကို ပြတင်းပေါက်၏ ဆန့်ကျင်ဘက် နံရံမှာ ထားလေ့ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိ ရသည်။ သတိပြုသင့် သည်မှာ အိမ်ရာ ခေါင်းရင်း ၊ ခေါင်းပေါ်တည့်တည့် တွင် မထားသင့်ပေ။ ခြေရင်းဘက်တွင် အလှမ်းဝေးပါက ထားနိုင်သည်။ အိပ်သည့် ကုတင်၏ ဘေးတိုက် အနေအထား တောင်ဘက် သို့မဟုတ် မြောက်ဘက်တွင် ထားလျှင် ပိုပြီး သင့်လျော်သည်။ ယင်းနောက် အိပ်ခန်းထဲတွင် Split Type ဟုခေါ်သော အပြင်တွင် ထားသည့် စက်အမျိုးအစား ကိုသာ သုံးသင့်သည်။
အဆိုပါ Split Type အမျိုးအစား သည် စက်ကို အခန်းအပြင်တွင် တပ်ဆင်လေ့ ရှိသဖြင့် ဆူညံမှုမရှိပါ။ Window Type ဟုခေါ်သည့် စက်နှင့် တွဲထားသော အဲယားကွန်းသည် တုန်ခါမှုနှင့် အသံဆူညံမှု ရှိသဖြင့် အိပ်စက်သည့် အခါ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေသည့် အပြင် အသံတစ်ခုကို နားယဉ်သွားလျှင် နောက်ပိုင်း ထိုအသံ မကြားရပါက အိပ်မပျော် ဖြစ်လေ့ ရှိတတ်သည်။
တချို့ ကားမောင်းနေစဉ် အဲယားကွန်း ဖွင့်လေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ ကားမောင်းစဉ် အဲယားကွန်း ဖွင့်ပါက သတိနှင့် ဆင်ခြင်သုံးစွဲသင့် သည်။ အပြင် အပူချိန်နှင့် အတွင်းအပူချိန် ကွာခြားမှု များလျှင် မကောင်းပါ။ ယခုခေတ်တွင် ကိုယ်ပိုင် ဆလွန်းကားများ သာမကတော့ဘဲ လူစီးဘတ်စ်ကား ကြီးများမှာပါ အဲယားကွန်း ကို တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးစွဲလာကြ သည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ အဲယားကွန်း ဖွင့်ထားသည့် ကားထဲမှ အပြင်သို့ ရုတ်တရက် အထွက်တွင် အပူလုံးရိုက်ပြီး မူးလဲသွားသည့် အဖြစ်မျိုး တွေ့ဖူးသည်။ အတွင်း အပူချိန် နှင့် ပြင်ပ အပူချိန် ကွာဟချက် များသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။
အပူ အအေး အပြောင်းအလဲ တွင် ရုတ်တရက် မူးလဲတတ် သဖြင့် လူကြီးတွေဆိုလျှင် ဘေးကနေ စောင့်ပြီး တွဲဆင်းသင့်သည်။ လေအေးပေး စက်နှင့် အိပ်စက်သူ ၊ သုံးစွဲနေကြသူ များအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ် စာရေးသူ ၏ အမြင်ရှုထောင့်မှ တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by myawady at 4:05 PM4comments:
အာရှနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများကို ခြိမ်းခြောက်လာနေသော ဆေးဝါးအတု ပြဿနာ
သင့် ချစ်လှစွာသော သားငယ်လေး ငှက်ဖျား ဖြစ်နေတယ် ဆိုပါစို့ ။ ငှက်ဖျားဆိုတာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက အကြီးဆုံး လူသတ်ကောင်ကြီး ဆိုတော့ စိုးရိမ်တာပေါ့။ ကလေးက ကိုယ်ပူလည်း ပြန်မကျဘူး၊ ချွေးစေးတွေ ပြန်နေတယ်၊ အန်နေတယ်၊ ချမ်းတုန်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ ခုနကပဲ ဈေးထဲကနေ ငှက်ဖျားဖြစ်ရင် သောက်ရမယ့် ဆေးတွေ ၀ယ်လာတာပဲ၊ တိုက်လိုက်ရုံ ပဲပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဆေးတွေ တိုက်ပေမယ့် ကလေးရဲ့ ဝေဒနာ သက်သာမလာဘူး ဆိုရင်၊ ဝေဒနာ သက်သာ မလာတဲ့အတွက် ပိုကောင်းတဲ့ ဆေးတွေ ၀ယ်တိုက် ပေမယ့်လည်း ကလေးရဲ့ အခြေအနေဟာ ဆိုးသည်ထက် ဆိုးလာမယ်ဆိုရင်၊ နောက်ဆုံးမှာ ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်တော့ဘဲ ဒီကလေးရဲ့ အသက်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရမယ် ဆိုရင်၊ နောက်ကျမှ အဲဒီဆေးတွေဟာ အတုတွေ ဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရတယ် ဆိုရင် သင်ဘယ်လို ခံစားရမလဲ ဆိုတာ တွေးကြည့်ပါ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အာဖရိကမှာ ဒါဟာ လက်ရှိ ဖြစ်ပွားနေလို့ ပါပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ၀ိသမ လောဘသားေ တွက ဆေးဝါးအတုတွေ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ နေပါတယ်။ သူတို့ အတွက်တော့ ဒေါ်လာ ဘီလီယံများစွာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စီးပွားရေး ကြီးပေါ့။ အဲဒီဆေးဝါး တွေကို ယုံကြည်စွာ ၀ယ်ယူသုံးစွဲ နေကြတဲ့ အပြစ်မဲ့ လူသားတွေ မှာတော့ နှစ်စဉ် လူပေါင်း သိန်းနဲ့ ချီပြီး သေဆုံး ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ငှက်ဖျား ဖြစ်ပွားမှု အဆိုးရွားဆုံး ကုန်းမြေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံ နေရဆဲဖြစ်တဲ့ အာဖရိက ကိုမှ ရွေးချယ်ပြီး ဒီလောဘသား တွေက ငှက်ဖျားဆေး အတုတွေ သွင်းကြပါတယ်။ နဂိုကမှ ဆင်းရဲနွမ်းပါး တဲ့ အာဖရိက နိုင်ငံသား တွေဟာ ၀မ်းစာကိုတောင် အနိုင်နိုင် ရှာနေရတာ၊ ဆေးဖိုးလိုလာရင် အချိန်ပို အလုပ်တွေ ဆင်းပြီး ခြစ်ခြုပ်ကုပ်ကပ် စုဆောင်းပြီး ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကိုင်ပြီးတော့ ဆေးသွားဝယ်ကြ ရတာပါ။ ရလာတဲ့ ဆေးကို တန်ဖိုးကြီးစွာ ထားပြီး ဝေဒနာခံစား နေရတဲ့ ကလေးငယ်ကို တယုတယ တိုက်လို့မျှော်လင့်ခြင်း ကြီးစွာ စောင့်ကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့ ကလေးခမျာ နေလောင်ပန်းလို နွမ်းခွေသွား ရာကနေ ပြန်လန်း မလာနိုင်တော့ ဘူးပေါ့။
ဒီဆေးဝါးအတု တွေကြောင့် အာဖရိကမှာ နှစ်စဉ်လူ ၁၂၀၀၀၀ ထက်မနည်း သေဆုံးနေတယ်။ သူတို့ ဟာ ဆေးဝါးအတု တွေရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်သွားကြတယ်၊ ဆေးတွေဟာ ရက်လွန်နေတဲ့ ဆေးတွေ ဒါမှ မဟုတ် ဆေးအာနိသင် ဘာမှကို မပါတဲ့ ဆေးအတုတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ က စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာ ခဲ့ပါတယ်။ ဆေးအတု ဆိုရာမှာ ဆေးအာနိသင် မပါတဲ့ဆေးနဲ့ဆေးအာနိသင် မပြည့်ဝတဲ့ဆေး တွေကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဆေးအာနိသင် လုံးဝမပါတဲ့ ဆေးထက် ဆေးအာနိသင် မပြည့်တဲ့ဆေးက ပိုပြီး အန္တရာယ် ရှိပါတယ်။ အာနိသင် မပြည့်ဝတဲ့ဆေး တွေကို ရေရှည် သောက်သုံးခြင်း အားဖြင့် ဆေးယဉ်ပါး ရောဂါကို ရရှိသွားနိုင်ပြီး ငှက်ဖျားနဲ့ အဆုပ်တီဘီလို ရောဂါတွေ ကို ကုသရာမှာ ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အခုဆိုရင် အာဖရိက-ဆာဟာရ တိုက်ငယ်မှာ ရောက် နေတဲ့ ငှက်ဖျား တိုက်ဖျက်ရေး ဆေးဝါးတွေ အားလုံးရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံထက် မနည်းက အတု ဖြစ်နေတာပါ။ ဒီဆေးအတု တွေက ဆေးအရောင်း ဆိုင်တွေ၊ ဆေးခန်းတွေ၊ လမ်းဘေးဆေးဆိုင် တွေကို ပျံ့ နှံ့ ရောက်ရှိ နေပါတယ်။ အွန်လိုင်း ကနေ ရောင်းချနေတဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်မရှိတဲ့ ဆေးဆိုင်တွေ ကနေလည်း ရောင်းချနေပါတယ်။ သူတို့အားလုံးကတော့ ဒီဆေးတွေ အတု ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ သိချင်မှသိကြမှာပါ။ ဒီတော့ အာဖရိကတိုက်ရဲ့ ဆေးဝါးအတု ပြဿနာကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ် ကြမလဲ ဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာနဲ့ တာဝန် ရှိသူတွေက ခေါင်းချင်းရိုက် ရပါပြီ။ နည်းပညာနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ ထွက်ပေါ်လာ ပါတယ်။
အမြတ်အစွန်း မယူတဲ့ Non-profit အသင်းအဖွဲ့Sproxil က ရိုးရှင်းတဲ့ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ကို ထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်။ ဆေးထုတ်တွေမှာ ခဲခြစ်အကွက်တွေ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဆေးကို ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် ခဲခြစ်ကွက် ကိုခြစ်မယ်၊ ပေါ်လာတဲ့လျှို့ ဝှက် နံပါတ်ကို Sproxil စီ ပို့ မယ်။ Sproxil က အဲဒီနံပါတ်ကို စစ်လိုက်ရင် ဒါဟာ တရားဝင်မှတ်ပုံတင် ထားတဲ့ဆေး ဟုတ်၊ မဟုတ် ချက်ခြင်းသိရှိပြီး ဖုန်းစာတိုနဲ့ ပြန်ဖြေပေးတယ်။ အဲလို မလုပ်ချင်ရင်လည်း ဆေးထုပ်ပေါ်က ဘားကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပြီး စစ်နိုင်သလို Sproxil ကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းဆက် လို့ လည်းရတယ်။ အဲဒီမှာ ၂၄ နာရီ ၀န်ထမ်းတွေ ထားရှိပေးတယ်။ အဲဒီလိုဖုန်း များများ ဆက်လာအောင်လို့ လည်း Sproxil က သူ့ စီကို ဖုန်းဆက်တဲ့ စုစုပေါင်း ကြာချိန် များရင် များသလို ဆုချမယ့် အစီအစဉ်တွေ လုပ်ပေးလိုက် သေးတယ်။ ဆေးအတု ထုတ်တာခံနေ ရတဲ့ ဆေးကုမ္ပဏီ ပေါင်း ၇၀ ကျော်ကလည်း Sproxil ရဲ့ အဲဒီအစီအစဉ် ကို ထောက်ခံ ကြတယ်။ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ကြတယ်။ Glaxo Smit Kline နဲ့Novartis လို ကမ္ဘာကျော် ဆေးကုမ္ပဏီကြီး တွေလည်း ပါတယ်။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ကစပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ အခုနောက်ဆုံး အချိန်အထိမှာ ဆေးဝါးအတု ဟုတ်၊မဟုတ် လှမ်းပြီး စစ်ဆေးကြတာ အကြိမ်ပေါင်း ၂၈ သန်းထက်မနည်း ရှိပြီဆိုတော့ ဒီအစီအစဉ် အောင်မြင်တယ် လို့ဆိုရမှာပေါ့။ ရိုးရှင်းပြီး အကုန်အကျ သက်သာတဲ့ နည်းစနစ်နဲ့ဆေးဝါးအတု တွေရဲ့ ရန်ကို ကာကွယ်နိုင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဖရိက တစ်ခွင်မှာ ကင်ညာ၊ ဂါနာ၊ နိုင်ဂျီးရီးယား၊ တောင်အာဖရိက၊ တန်ဇေးနီးယားတို့ မှာ Sproxil ရဲ့ဆေး အတု ဟုတ်၊မဟုတ် စစ်ဆေးတဲ့ ခဲခြစ်စနစ်ကို ကျယ်ပြန့် စွာအသုံးပြုလျက်ရှိပြီး အခုနောက်ဆုံး မာလီနိုင်ငံ လည်း ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအတုကို စစ်ဆေးတဲ့စနစ် အောင်မြင်စပြုလာပြီဆိုတာနဲ့ တပြိုင်နက် သက်ဆိုင်ရာက အဲဒီဆေးအတုထုတ်လုပ် သူတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး ရရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ယ်ယူသူ တစ်ဦးရဲ့ လက်ထဲကို အဲဒီဆေးအတု ဘယ်လို အဆင့်ဆင့် ရောက်ရှိလာသလဲ ဆိုတာဟာ အတော့်ကို ပြန်လိုက်ရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်နေပါတယ်။
အာဖရိကတိုက် ထဲမှာပဲ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဆေးအတုတွေ မဟုတ်ဘဲ နယ်စပ်စည်းကို ဖြတ်ကျော် ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဆေးဝါး အတုတွေလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဆေးဝါးအတု ထုတ်လုပ်တဲ့ ပင်ရင်းနေရာကို မဖော်ထုတ် နိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း သယ်ယူပို့ ဆောင် နေဆဲ အချိန်တွေမှာတော့ အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ကြားဖြတ်ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက် လေ့လာချက် အရ ဆေးဝါးအတု စီးဆင်းမှုက အာရှနဲ့ အာဖရိက ၁၂ နိုင်ငံမှာ ယှက်ဖြာနေတာပါ။ အာဖရိက နဲ့သက်ဆိုင်ရာက ဖမ်းဆီးဖော်ထုတ် ခဲ့တဲ့ ဆေးဝါးအတု တွေဟာ လူပေါင်း ၇၅ သန်း အသုံးပြုလို့ ရတဲ့ ဆေးဝါး ပမာဏတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီလောက်နိုင်ငံ အများကြီးကို ယှက်ဖြာနေတဲ့ ဆေးဝါးအတု ပြဿနာကိုဖြေရှင်း ဖို့နိုင်ငံတကာက RFID လို့ ခေါ်တဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်း ကြိမ်နှုန်းသုံး စိစစ်ရေး နည်းပညာကို အသုံးပြု လာကြပါတယ်။
ဆေးအစစ်တွေ ပေါ်မှာ RFID ဖတ်လို့ ရတဲ့ စနစ်တွေ ထည့်ကြတယ်။ စက်နဲ့ ကြည့်မှ မြင်ရတဲ့ လုံခြုံရေးအမှတ် တံဆိပ်တွေ ထည့်ကြတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကစပြီး အာဖရိက ၃၂ နိုင်ငံက ကျွမ်းကျင်သူ ၁၉၀ ဦးကို ဆေးအတုနဲ့အစစ် ခွဲခြားနည်း သင်တန်းတွေ ပေးခဲ့ကြတယ်။ သေချာတာကတော့ ဆေးအတု တွေကို အာရှမှာလုပ်ပြီး အာဖရိက ကို တင်သွင်းလာတယ် ဆိုတာပဲ။ ဆေးအတု တင်သွင်းတဲ့ နှုန်းနဲ့အတု၊အစစ် ခွဲခြားနိုင်တဲ့ နှုန်းက ဘယ်လိုမှ မမျှတဲ့အတွက် အခုအချိန်အထိ ဆေးအတု သောက်သုံးမိလို့ မသေသင့်ဘဲ သေဆုံးရသူတွေ သန်းနဲ့ ချီ ရှိနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးကုမ္ပဏီ တွေကလည်း နိုင်ငံပေါင်းစုံက ဆိုတော့ သူတို့ အားလုံးကို ဆေးအတု၊အစစ် ခွဲခြားနိုင်ရေး လုံခြုံရေး အစီအမံတွေ ထည့်သွင်းစေဖို့ဆိုတာ အတော်စည်းရုံး ယူခဲ့ရပါတယ်။ ဆေးအတုကြောင့် နေ့ စဉ် အပြစ်မဲ့သူတွေ သေဆုံး နေရပါတယ်။ ဒီဆေးအတု တွေ အာရှကနေ အာဖရိကကို စီးဆင်းရာမှာ နယ်စပ်ဂိတ် တွေကို သေချာပေါက် ဖြတ်သန်းရ ပါတယ်။ ဒါကို မဖမ်းမိဘူး ဆိုရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်းများ အကျင့်ပျက် ခြစားလို့ ပဲဖြစ်မှာပါ။ အခြေအနေ အတော်လေး ဆိုးရွားနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ဆေးဝါးအတု ပြဿနာ အကြောင်း သတိထားမိစေဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လေ့လာရေးသား လိုက်ရပါတယ်။
အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန် ညွှန်ကြားမှု မလိုက်နာဘဲ လေးကြိမ်နှင့်အထက် ဒဏ်ကြေးပေးဆောင် ရသည့် စားသောက်ဆိုင်များကို ထုတ်ပြန်ကြေညာ သွားမည်
စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်နှင့် တည်းခိုခန်း များ၏ ငွေရှင်းပြေစာ များတွင် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ရန် ပညာပေးခြင်း လုပ်ငန်းများကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် နှစ်ကုန် ကစတင်ခဲ့ပြီး ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် အမှတ် တံဆိပ် မကပ်သည့် စားသောက်ဆိုင် များကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် မေလကစ၍ ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင် စေခဲ့သည်။
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ် တစ်နှစ်လုံးတွင် အခွန်တံဆိပ် မကပ်သည့် စားသောက်ဆိုင် ၂၆၄ ဆိုင်ကို ဒဏ်ရိုက်ခဲ့ပြီး ဒဏ်ကြေးငွေ ငွေကျပ် သိန်း ၇၂ဝ ကျော် ရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အခွန် အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ရန် တစ်ကြိမ် ပျက်ကွက် ပါက ငွေကျပ် နှစ်သိန်း၊ နှစ်ကြိမ် ပျက်ကွက် ပါက ငွေကျပ် ငါးသိန်း၊ သုံးကြိမ် ပျက်ကွက် ပါက ငွေကျပ် ခုနစ်သိန်းနှင့် သုံးကြိမ်နှင့် အထက် ပျက်ကွက်ပါက ငွေကျပ် ၁ဝ သိန်းအထိ ဒဏ်ရိုက်ရန် ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန် ဥပဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်း ထားကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၇)
Posted by myawady at 1:02 PM No comments:
စက်မှုကဏ္ဍပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စက်မှုဇုန်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စက်မှုကဏ္ဍ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာ စေရန် စက်မှုဇုန် ဆိုင်ရာ အခြေခံ လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သော လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး၊ မြေနေရာ ရရှိရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများ ဝင်ရောက် လာစေရေး တို့ကို နိုင်ငံတော် အစိုးရက ပံ့ပိုးကူညီ ပေးသင့်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှု ကုန်ထုတ်လုပ် သူများအသင်း တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
စက်မှုကဏ္ဍ များတွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရ၏ ပံ့ပိုးမှုများ လိုအပ်နေပြီး စက်မှု ထုတ်ကုန်များ၏ ဈေးကွက် အနေအထား မှာလည်း အဓိကကျလျက် ရှိသည်။ ကုမ္ပဏီများ ဆက်လက် ရပ်တည်နိုင်ရန် နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရန် ပြည်တွင်း၌ သာမက ပြည်ပဈေးကွက် များနှင့်ပါ ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိရသည်။
စက်မှုကဏ္ဍ ကုန်ပစ္စည်း ပြပွဲများ ပြုလုပ်သည့် အတွက် ပြည်တွင်း ကုန်ထုတ်လုပ် မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးတက် လာပြီး ပြည်တွင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များနှင့် ပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘဝ များလည်း မြင့်တက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်သူများ အသင်း ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးထွန်း က ပြောသည်။
ထိုကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စက်မှုကဏ္ဍ ပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးအတွက် အကူအညီ ပေးနိုင်သကဲ့သို့ ကုန်ထုတ် စွမ်းအားစုများ တိုးတက်စေရန်နှင့် နည်းပညာမြင့် စက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်း အရည်အသွေး များ တိုးတက် လာစေရန် ရည်ရွယ် ကျင်းပမည့် စတုတ္ထ အကြိမ်မြောက် မြန်မာ့ဦးဆောင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထပ်ဆင့် ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေး မိတ်ဖက် များ ရှာဖွေခြင်း ပြပွဲကို အောက်တိုဘာ ၂ဝ ရက်မှ ၂၂ ရက်အထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တပ်မတော် ခန်းမ၌ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 12:59 PM No comments:
အားကစားမြင်ကွင်းဂျာနယ် အတွဲ(၅) အမှတ်(၃၇)
SportsView(Vol-5,37) by TheMyawadyDaily on Scribd
Posted by myawady at 11:14 AM No comments:
မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာအလုပ်သမား ၁၃၈ ဦး ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်း ၁၁ ခုတွင် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ သား များအနက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်ရန် လေယာဉ်စရိတ် မတတ်နိုင်သူ C of I ရရှိပြီးသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသား ၁၃၈ ဦးနှင့် ရင်ခွင်ပိုက် ကလေး တစ်ဦးတို့အား ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ် ကိုင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၏ ကြီးကြပ်မှု၊ Mother Trading and Construction Co.,Ltd. နှင့် မိဘဂုဏ်ရည် အဖွဲ့သားများ၏ လှူဒါန်းမှုဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူ လေဆိပ်မှ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်း (MAI) လေယာဉ်ဖြင့် ယမန်နေ့ည ၈ နာရီ မိနစ် ၄ဝ တွင် ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာလေဆိပ် သို့ ရောက်ရှိ လာသည်။
ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာသည့် အလုပ်သမား များအား Mother Trading and Construction Co.,Ltd. နှင့် မိဘဂုဏ်ရည် အဖွဲ့သားများ၏ လှူဒါန်းမှုဖြင့် အလုပ်သမား တစ်ဦးလျှင် ငွေကျပ် ၅ဝဝဝဝ စီ ထောက်ပံ့ပေးပြီး နေရပ်သို့ ချက်ချင်းပြန် နိုင်ခြင်း မရှိသူများကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ဓမ္မာရုံ၌ နေရာချထား ပေးကာ IOM အဖွဲ့မှ နေရပ်ပြန် ခရီးစရိတ်၊ အဝတ်အထည်၊ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများနှင့် ဆေးဝါး ပစ္စည်းများ ကို ထောက်ပံ့ ကူညီခြင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာန ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများမှ လိုအပ်သည့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနသည် ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ၌ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ကြောင့် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ နေရပ်ပြန်မည့် အလုပ်သမား များအား ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ ယင်းတို့၏ မိသားစုများနှင့် ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ ဌာန အဖွဲ့အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများမှ C of I ဖြင့် ပြန်လာသည့် အလုပ်သမား များအား နိုင်ငံတော် အစီအစဉ်ဖြင့် သြဂုတ် ၈ ရက် မှစ၍ ပြန်လည် ခေါ်ယူလျက် ရှိရာ ပထမအကြိမ် မှ ယခု ဒသမ အကြိမ်အထိ စုစုပေါင်း ၁၃၇၂ ဦးနှင့် ရင်ခွင်ပိုက် ကလေး လေးဦးတို့ကို ပြန်လည်ခေါ်ယူ ပေးပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မွေတော်ကက္ကူပရိဝုဏ် အတွင်းရှိ ဘုရားစေတီပုထိုးများကို အောက်တိုဘာလ နောက်ဆုံးပတ်မှစ၍ ရှေးမူလက်ရာမပျက် ပြန်လည်ပြုပြင်မည်
တောင်ကြီး ၊ ၃၀-၉-၂၀၁၆
ယခုနှစ် မေလအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မုန်တိုင်းဒဏ်ေ ကြာင့် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့ ရှိ မွေတော် ကက္ကူဘုရား ပရိဝုဏ် အတွင်းရှိ စေတီ ပုထိုးပေါင်း များစွာ ပျက်စီးခဲ့ရာ အဆိုပါ ပျက်စီးမှုများကို ရှေးမူလက်ရာ မပျက် ပြန်လည် ပြုပြင်ရန် ပညာရှင် များနှင့် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ ဘုရားဂေါပက အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးထံမှ သိရသည်။
''ပြုပြင်ရမယ့် ဘုရားစေတီ ပုထိုးပေါင်းက များတာကြောင့် ပထမ ဦးစားပေး အနေနဲ့ ဉာဏ်တော်အမြင့် ၁၄ ပေ ကနေ ပေ ၃ဝ အထိ၊ ဒုတိယ ဦးစားပေး အနေနဲ့ ဉာဏ်တော် အမြင့် ၁၉ ပေ ကနေ ၂၄ ပေအထိနဲ့ အပျက်အစီး နည်းပါးတဲ့ အရံစေတီ တွေကို နောက်ဆုံးအဆင့် ဆိုပြီး ခွဲခြားပြင်ဆင် သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်''ဟု ၄င်းက ဆက်လက် ပြောသည်။
ပျက်စီးသွားသော စေတီပုထိုးများ အနက် အကြီးစား ပြုပြင်ရမည့် စေတီများမှာ ၁ဝ၄ ဆူ၊ အလတ်စား ပြုပြင်ရမည့် စေတီများမှာ ၅၉၂ ဆူရှိပြီး အသေးစား ပြုပြင်ရမည့် စေတီမှာ ၃၄၂ ဆူရှိကြောင်း သိရသည်။ မေလအတွင်း က မွေတော်ကက္ကူ ဘုရား ပရိဝုဏ် အတွင်းရှိ ဆုတောင်း ပြည့် အာသောက ဘုရားကြီးကို ဦးစားပေး ပြင်ဆင်ခဲ့ရာ လက်ရှိတွင် ပြင်ဆင်မှု ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပျက်စီးသွားသော စေတီပုထိုး များကို အနယ်နယ် အရပ်ရပ်မှ အလှူရှင်များ နှင့် ဘုရားဖူးများ လာရောက် လှူဒါန်းထားသော အလှူငွေ များနှင့် ပြန်လည်ပြုပြင် လျက်ရှိပြီး ပြန်လည် မွမ်းမံရန် မေလအတွင်း မှစတင်၍ အလှူငွေများ ကောက်ခံခဲ့ရာ သြဂုတ်လအထိ စုစုပေါင်း အလှူငွေ ငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ၂ဝဝဝ ကျော် ရရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
3092016 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိတော့မည် ဖြစ်သဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ခရီးသွားလာမှု သိသာစွာ တိုးတက်လာမည်ဟု ခန့်မှန်း
ရန်ကုန် ။ ၂၉-၉-၂၀၁၆
မြန်မာနိုင်ငံသား များအနေဖြင့် စင်ကာပူ နိုင်ငံသို့ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်မှ စတင်၍ ရက် ၃ဝ ထက်မပိုသော သွားရောက် လည်ပတ်မှု အတွက် ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်၍ ခရီးသွားလာမှု သိသိသာသာ မြင့်တက်လာ နိုင်မည်ဟု မျှော်မှန်း ထားကြောင်း စင်ကာပူနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ် ထိုင်းနိုင်ငံ နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရိယာ ဒါရိုက်တာ Sherleen Seah က ပြောသည်။
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အထိ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ခရီးသွား ဧည့်သည် သွားရောက် လည်ပတ်မှု ၃ ရာခိုင်နှုန်း အထိ တိုးတက် လာကြောင်း၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က စင်ကာပူ နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ခရီးသွား ဧည့်သည် ၁ဝ၅၄၅၂ ဦး သွားရောက် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်သည် မြန်မာ-စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံ သံတမန် ဆက်သွယ်မှု နှစ်ပေါင်း (၅ဝ) ပြည့်သည့်အပြင် ဗီဇာ ကင်းလွတ်ခွင့် လည်း ရရှိတော့မည့် နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်သဖြင့် ခရီးသွားလာမှု တိုးတက်မည်ဟု မျှော်မှန်းခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စင်ကာပူ နိုင်ငံသို့ ခရီးသွား ဧည့်သည် ဝင်ရောက်မှုမှာ အင်ဒိုနီးရှား၊ တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တို့မှ အများဆုံး ဖြစ်သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ ခရီးသွား ဧည့်သည် လာရောက်မှု တိုးတက် လာသဖြင့် အဆင့် (၂ဝ) ၌ စာရင်းဝင်ကြောင်း ဒါရိုက်တာ Sherleen Seah က ဆက်လက် ပြောသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ၌ တစ်နှစ်ပတ်လုံး နီးပါး ပွဲတော်များ ရှိခြင်း၊ အစားအသောက် များ ကောင်းခြင်းနှင့် ရှောပင်းစင်တာ များစွာရှိခြင်း စသည့် အချက်များမှာ ခရီးသွားဧည့်သည် များအတွက် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှု ရှိပြီး မြန်မာ ခရီးသွား ဧည့်သည် များလည်း လည်ပတ်မှု အများဆုံးနိုင်ငံ တစ်ခု၌ ပါဝင်နေကြောင်း သိရသည်။
စင်ကာပူနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ အပန်းဖြေစရာ နေရာများသို့ မြန်မာ ခရီးသွား ဧည့်သည်များ သွားရောက် လည်ပတ်ခံစား နိုင်စေရန် ဈေးကွက် ရှာဖွေရေးနှင့် အရောင်း မြှင့်တင်ရေး လှုပ်ရှားမှု ပေါင်းများစွာကို ယမန်နှစ် အတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် မြန်မာ-စင်ကာပူ ခရီးစဉ် အတွက် မြန်မာကုမ္ပဏီ ပေါင်း ၂ဝ ခန့်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။ (ကေကေ)
Labels: ခရီးသွားလုပ်ငန်း, အာဆီယံ
ရေစကြိုမြို့နယ်၌ တိုင်းရင်းသားရိုးရာအဆင် များ ရက်လုပ်မှု အောင်မြင်နေ
ရေစကြို ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ရေစကြိုမြို့နယ် သည် ရှေးယခင် ကတည်းက လက်ရက်ကန်း ထွန်းကားသော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မျက်မှောက် ကာလတွင် လက်ရက်ကန်း လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဦးမော့ လာခဲ့သော်လည်း လုပ်သား ရှားပါးမှုကြောင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းများတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ နေရကြောင်း၊ ထိုသို့ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ နေရသောကြောင့် လက်ရက်ကန်း မှ စက်ရက်ကန်း သို့ ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး တိုင်းရင်းသား ရိုးရာအဆင် များ ရက်လုပ် ရောင်းချလျက် ရှိရာ အောင်မြင်မှုများ ရရှိနေကြောင်း ရေစကြိုမြို့နယ် ဆင်ချောင်းစံပြ ကျေးရွာ ရက်ကန်း လုပ်ကိုင်သူများ ထံမှ သိရသည်။
''ကျွန်တော်က လွန်ခဲ့တဲ့ ခုနစ်နှစ်လောက် ကတည်းက လက်ရက်ကန်းစင် ၅ဝ လောက်နဲ့ ကချင်ရိုးရာ အဆင်နဲ့ ချင်းရိုးရာ အဆင်တွေ ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ လက်ရက်ကန်း ဖြစ်တဲ့အတွက် ထုတ်လုပ်မှုတော့ နှေးတာပေါ့။ အဲဒီ အချိန်ကတော့ လုပ်သားရှိရင် ရှိသလို လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခဲ့ တာပေါ့။ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ လုပ်သား က ရှားလာတော့ အခု လက်ရက်ကန်း နေရာမှာ စက်ရက်ကန်းကို အစားထိုး လုပ်ကိုင် နေပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းကို တော့ မန္တလေးမြို့က ဝယ်ပါတယ်။ ကုန်ချော ကိုတော့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မြစ်ကြီးနား မြို့ကြီးတွေမှာ ရှိတဲ့ ရိုးရာ အရောင်းဆိုင် တွေကို တင်သွင်းပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ ရောင်းအားက ကောင်းနေပါတယ်'' ဟု ဆင်ချောင်း စံပြကျေးရွာမှ ''ဝန်းရံခ'' တိုင်းရင်းသား ရိုးရာအဆင် ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းရှင် ကိုမင်းမင်းထိုက် က ပြောသည်။
အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ အဆင်များကို မြန်မာ တိုင်းရင်းသားများ သာမက ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွားများပါ အထူးနှစ်သက် ကြကြောင်း ရက်ကန်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ ထံမှ သိရသည်။
TNLA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင်လေးဦး ဥပဒေဘောင်အတွင်း ၀င်ရောက်
နေပြည်တော် ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ ပိန်းပြစ်ကျေးရွာ အတွင်း လုံခြုံရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက် ရှိသော တပ်မတော် စစ်ကြောင်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့ ထံသို့ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် ည ၈ နာရီတွင် TNLA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ တပ်ရင်း(၆၆၆)မှ တပ်သားအဆင့် ရှိ လှသာ(ခ) အိုက်ကြက် ၄၆ နှစ်နှင့် ညီမင်းထွန်း (ခ) ညီချား ၁၇ နှစ် တို့သည် လည်းကောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် တပ်သားအဆင့် ရှိ လှအောင် ၃၆ နှစ်နှင့် ကျော်ကျော်(ခ) အယိုင် ၃၇ နှစ်တို့ သည် လည်းကောင်း လက်နက်မဲ့ ဥပဒေဘောင် အတွင်း ဝင်ရောက် ခဲ့သည်။
ဥပဒေဘောင် အတွင်း ဝင်ရောက်ခဲ့သော TNLA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ အဖွဲ့ဝင် လေးဦးသည် ယခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၅ ရက် ညပိုင်းတွင် TNLA လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့မှ ပိန်းပြစ်ရွာ အတွင်း ဝင်ရောက်လာပြီး တပ်သားသစ်များ အဖြစ် ၄င်းတို့ အပါအဝင် ရွာသား ၂၅ ဦးအား အတင်းအဓမ္မ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားခဲ့ကာ စစ်ရေးပြနှင့် လက်နက်ငယ်သင်တန်း၊ ပလောင်စာပေ တို့အား သင်ကြားခဲ့ ရပြီး တပ်ရင်း (၆၆၆) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင် ခဲ့ရကြောင်း၊ ယင်းစခန်းမှ တပ်မတော် စစ်ကြောင်းများ ထံသို့ လာရောက်၍ ဥပဒေဘောင် အတွင်းသို့ အသီးသီး ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
Posted by myawady at 12:05 PM No comments:
လယ်ယာကဏ္ဍတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ စုစုပေါင်း ၁ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာရှိ
ရန်ကုန် ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆
''လယ်ယာကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ချင်တယ်ဆိုပြီး တင်ပြထားတာ ရှိပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင် ဒီနေ့အထိ လယ်ယာကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စုစုပေါင်း သုည ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှုန်း လောက်ပဲ ရှိတယ်။ လက်ရှိ လယ်ယာကဏ္ဍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒ တွေကို တိုးမြှင့်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ လယ်ယာကဏ္ဍနဲ့ စက်မှုကဏ္ဍ နှစ်ခုကို ချိတ်ဆက်ပြီး တိုးတက်အောင် လုပ်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိ ပါတယ်'' ဟု ဦးသန်းအောင်ကျော် ကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ မှရရှိသော ဝင်ငွေကို တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ လူဦးရေပေါ် မူတည်ပြီး တွက်ချက်ရာတွင် ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်ဦးလျှင် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ဝဝ သာ ရရှိကြောင်း သိရသည်။လက်ရှိတွင် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍသည် ပြည်တွင်းအသားတင် ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး၏ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းရှိပြီး ပြည်ပပို့ကုန် ဝင်ငွေ၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိကြောင်းနှင့် အလုပ်အကိုင် ရရှိမှုတွင် ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်း အထိရှိကာ မြင့်မားသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ကြောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေရေး အတွက် စီးပွားရေးကဏ္ဍကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း စီးပွားရေး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (OECD) မှ သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး ကဏ္ဍတို့၌ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရာနှုန်းပြည့် ခွင့်ပြုထားခြင်း မရှိဘဲ အကန့်အသတ်များ ဖြင့်သာ ခွင့်ပြုထားသည်။
ယခုကဲ့သို့ အခြေအနေ မျိုးတွင် လယ်ယာကဏ္ဍ၌ နိုင်ငံတော် အစိုးရက ချေးငွေနှင့် ပတ်သက်သည့် ပံ့ပိုးမှုများ လုပ်ဆောင် ပေးခြင်း၊ စက်မှုလယ်ယာ စက်ကိရိယာများ အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးခြင်း နှင့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှ ချေးငွေပေး နိုင်ခြင်းတို့ လိုအပ်နေကြောင်း သိရသည်။ (ဇာဏီ)
Posted by myawady at 11:59 AM No comments:
Labels: စိုက်ပျိုးရေး, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ
ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပေါင်မြို့နယ်ရှိ နွားလပို့တောင်စေတီဝန်းကျင် ဒေသကို သဘာ၀၀အခြေခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရန် ကွင်းဆင်းလေ့လာမည်
ပေါင် ၊ ၂၉-၉-၂၀၁၆
မွန်ပြည်နယ် ပေါင်မြို့နယ် ကျုံကကျေးရွာ ရှိ နွားလပို့တောင်စေတီ ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသ ကို လာမည့် ပွင့်လင်းရာသီ တွင် ရပ်ရွာလူထု အခြေပြု သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရန် ကွင်းဆင်း လေ့လာသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဟောက်ကျင်မုန် ထံမှ သိရသည်။
''နွားလပို့တောင် စေတီ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ဒေသကို သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွား လုပ်ငန်းအဖြစ် ဖော်ဆောင်တဲ့ အခါမှာ တောတောင်တွေရဲ့ဂေဟစနစ်တွေ မပျက်စီးအောင် လုပ်ဆောင်သွား မှာပါ'' ဟု ဦးဟောက်ကျင်မုန် က ပြောသည်။
ယင်းနေရာကို ရပ်ရွာလူထု အခြေပြု သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖော်ဆောင်ရန် ကွင်းဆင်း လေ့လာမှု အဆင်ပြေပါက မကြာမီ အကောင်အထည်ဖော် သွားမည် ဖြစ်သည်။
နွားလပို့တောင် စေတီ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရပ်ရွာလူထု အခြေပြု သဘာဝအခြေခံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အဖြစ် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်ပါက ဒေသခံပြည်သူများ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 10:55 AM No comments:
ယခုနှစ်တွင် ပြည်ပသို့ထွက်၍ ရာထူးတိုးစာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့်မြန်မာသင်္ဘောသား ဦးရေလျော့နည်းလာ
ယခင်နှစ်များက ပြည်တွင်း၌ ရာထူးတိုး စာမေးပွဲဖြေဆို ကြသည့် မြန်မာ သင်္ဘောသား အများစုမှာ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ ထွက်၍ ဖြေဆိုခဲ့ကြ သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ပြည်တွင်း၌ အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားသဖြင့် ဖြေဆိုမှု များပြားခဲ့ သောကြောင့် ပြည်ပသို့ ထွက်၍ ရာထူးတိုး စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့် သင်္ဘောသား ဦးရေမှာ သိသာစွာ လျော့နည်း သွားကြောင်း သိရသည်။
''အရင်ကဆိုရင် ပြည်တွင်းမှာ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမယ့် သင်္ဘောသား တွေကို စာတွေ့၊ လက်တွေ့သင်ကြား ပေးနိုင်မယ့် သင်တန်း ကောင်းကောင်းတွေ မရှိဘူး။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် အတွင်း ပြည်တွင်းမှာ ပုဂ္ဂလိက အထောက်အကူပြု သင်တန်းတွေ ဖွင့်လှစ် လာတာကြောင့် မြန်မာ သင်္ဘောသားတွေ စာမေးပွဲဖြေတာ အထောက်အကူ ပြုတဲ့အတွက် ပြည်ပကို ထွက်ပြီး ဖြေဆိုတဲ့နှုန်း လျော့သွားတာပါ'' ဟု ဝါရင့်မြန်မာ သင်္ဘောသား ဦးဝေဖြိုး က ပြောသည်။
ယခုနှစ်ထဲတွင် ပြည်တွင်း၌ အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း မြင့်မားမှုသည် ယခင်နှစ် များထက် ပျမ်းမျှအားဖြင့် ထက်ဝက်ခန့် မြင့်တက်လာကြောင်း၊ သင်္ဘောသား များသည် ကုန်းပတ်နှင့် အင်ဂျင်ပိုင်း စသည့်ရာထူး များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စာမေးပွဲများကို ဖြေဆိုကြကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာသင်္ဘောသား များသည် ပြည်ပသို့ ထွက်၍ ရာထူးတိုး စာမေးပွဲ ဖြေဆိုရာတွင် ဖိလစ်ပိုင်နှင့် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံတို့၌ သွားရောက်ဖြေဆို ကြပြီး လက်ရှိတွင် ပြည်တွင်း၌ မှတ်ပုံတင် ထားသူ မြန်မာ သင်္ဘောသား ဦးရေ တစ်သိန်းနီးပါး ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။
Posted by myawady at 8:57 AM No comments:
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း ရွှေဈေးနှုန်းသည် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် ရန်ကုန် ဈေးကွက်၌ အကယ်ဒမီရွှေ တစ်ကျပ်သား အဖွင့်ဈေးနှုန်း ငွေကျပ် ၈၈၆၅ဝဝ နှင့် အပိတ်ဈေးနှုန်း ငွေကျပ် ၈၉၄ဝဝဝ ရှိပြီး အောင်သမာဓိ ရွှေဆိုင် ၁၆ ပဲရည် ရွှေဈေးနှုန်းမှာ အဖွင့် ငွေကျပ် ၈၈၆၅ဝဝ နှင့် အပိတ်ငွေကျပ် ၈၉၃ဝဝဝ ဖြစ်သည်။ ငွေလဲနှုန်းမှာ အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ဗဟိုဘဏ် ငွေလဲနှုန်း ငွေကျပ် ၁၂၃၅ ကျပ်၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် ငွေလဲနှုန်း ငွေကျပ် ၁၂၄၃ ကျပ်မှ ၁၂၄၅ ကျပ်၊ ပြင်ပဈေးကွက် ငွေလဲနှုန်း ငွေကျပ် ၁၂၅၅ ကျပ်မှ ၁၂၅၉ ကျပ် ဖြစ်သည်။
စက်တင်ဘာ ၇ ရက် ရန်ကုန် ရွှေဈေးကွက်၌ ၁၆ ပဲရည် တစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ် ၈၇၁ဝဝဝ၊ ငွေလဲနှုန်း အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာ လျှင် ငွေကျပ် ၁၂၁၄ ကျပ် ရှိခဲ့ရာမှ ပြည်တွင်းရွှေ ဈေးနှုန်းနှင့် ငွေလဲနှုန်းတို့ တက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက် ကမ္ဘာ့ ရွှေဈေးနှုန်းမှာ တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃၅၅ ဒေါ်လာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ရွှေဈေး တက်ရသည့် အကြောင်းရင်း များတွင် နိုင်ငံခြားငွေ လဲနှုန်း၊ ကမ္ဘာ့ ရေနံဈေးနှုန်း နှင့် ပြည်တွင်း အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းတို့ ဆက်စပ်မှု ရှိကြောင်း စီးပွားရေး ပညာရှင်များက ထောက်ပြ ထားသည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ကမ္ဘာ့ငွေကြေး စနစ်အတွက် အခရာ ဖြစ်သည့် အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး အပြောင်းအလဲ ဂယက်သည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ များကို လှုပ်ခတ် စေကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများမှ စီးပွားရေး သမားများသည် အမြတ်များများ ရနိုင်မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင် ကြရာ၌ ရှိသမျှကြက်ဥ အားလုံးကို ခြင်းတောင်း တစ်ခုတည်းမှာ ထည့်မထားရ ဆိုစကား ကဲ့သို့ လုပ်ငန်းတစ်ခု တည်းမှာသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျိုး မဟုတ်ဘဲ တစ်ခုထက် ပိုသော လုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားကြရာ အတိုးရရှိမှု နည်းသော ငွေချေးစာချုပ် (Bond) ကို ဝယ်ယူခြင်း၊ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း နှင့်အတိုးမရ သော်လည်း အရှုံးမရှိ နိုင်သော ရွှေကို ဝယ်ထားခြင်း စသည့် နည်းစနစ်များ ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ကြသည်။ ဤသို့ တစ်ခုထက်ပို၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ထားခြင်းဖြင့် တစ်ခု အရှုံးပေါ်လျှင် တခြားတစ်ခုက အမြတ်နှင့် ပြန်လည်ကာမိ နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်း ရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရွှေ ဈေးနှုန်းမှာ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများမှ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့၏ ရွှေဈေးနှုန်းနှင့် ဆက်စပ်လျက် ရှိသည်။ ယခုအချိန်တွင် ပြည်ပသို့ တရားဝင် ရွှေတင်ပို့ခွင့် ပြုရန် စီစဉ် နေကြောင်းလည်း သိရပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ အတွင်းသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ရွှေများကို တရားမဝင် ယူဆောင်လာသူ တစ်ဦးအား အိန္ဒိယ အစိုးရက ဖမ်းဆီး လိုက်သည့် သတင်း တွေ့ရသည်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ များတွင် ရွှေကို အသုံးချနည်း အမျိုးမျိုး ရှိကြရာတွင် ကျောက်မျက် ရတနာဖြင့် တွဲဖက်၍ လက်ဝတ်ရတနာ အဖြစ် အသုံးပြုမှု ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အတွက် အသုံးပြုမှုနှင့် ဗဟိုဘဏ် များက ရွှေဝယ်ယူ စုဆောင်းမှုတို့ ဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ အခြေအနေမှာ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နှင့် ဘရာဇီး နိုင်ငံတို့မှ အစိုးရ ဗဟိုဘဏ် များသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ စုဆောင်းမှုကို လျှော့ချပြီး ရွှေစုဆောင်း မှုများ လာသဖြင့် ယခင်က နိုင်ငံခြားငွေ အရန်အဖြစ် အမေရိကန် ဒေါ်လာကို ၈ဝ မှ ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ထားသော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်သာ ထားပြီး ရွှေစုဆောင်းမှု များလာကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများတွင် အိမ်ခြံမြေနှင့် ရွှေလုပ်ငန်းမှာ ယခင်က ရှိခဲ့ပြီး ယခုလည်း ဆက်လက် လုပ်ကိုင် နေကြသည်။ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန် စတော့အိတ်ချိန်း ဈေးကွက်ဖွင့်လိုက် သော်လည်း အကျဈေး ဖြင့်သာ ရောင်းဝယ် နေကြသဖြင့် ပြည်သူများ စိတ်ဝင်စားမှု နည်းနေသေးသည်။ ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပိုမိုဝင်ရောက် လာမည့် အလားအလာ ကောင်း သတင်းများလည်း ကြားနေရသဖြင့် ထိုသတင်းများက ရွှေဈေးနှင့် ငွေလဲနှုန်းကို လှုပ်ခတ်စေသော သက်ရောက်မှုများ ရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း ရွှေဈေးပြန်ငြိမ် သွားနိုင်ကြောင်း ဈေးကွက်အတွင်းမှ စကားသံများ ကြားရသည်။ သို့သော် တခြားတစ်ဖက် တွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် အဆင်မပြေ ဖြစ်ချိန်နှင့် ငွေကြေးလဲနှုန်း မတည်မငြိမ် ဖြစ်ချိန်များတွင် ငွေကြေး ကြွယ်ဝသူ များက ရွှေဝယ်ယူ စုဆောင်းခြင်းဖြင့် အကာအကွယ် ယူတတ်ကြ ပေရာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရွှေဈေးနှင့် ငွေလဲနှုန်း မတည်ငြိမ်မှုမှာ စောင့်ကြည့် ရဦးမည်သာ ဖြစ်ပေသည်။
နေပူထဲထွက်လျှင် သတိပြုရမည့် အချက်များ
ကမ္ဘာကြီးပူနွေး လာသည်နှင့် အမျှ နေ၏ အပူရှိန်လည်း တစ်နေ့တခြား ပို၍ပူပြင်း လာပေသည်။ ထို့ကြောင့် နေပူထဲ ထွက်လျှင် နေလောင်ဒဏ် ကာကွယ်ပေး နိုင်သောအရာများ ယူဆောင်ခြင်း ဖြင့်သာ အပြင် ထွက်သင့်သည်။ အထူးသဖြင့် အထက်အညာ ဒေသ နေထိုင်သူများ အတွက် ပို၍ သတိရှိရန် လိုသည်။ မြို့နေ လူတန်းစားများ အတွက် ထီး၊ ဦးထုပ်၊ နေကာမျက်မှန် စသည်တို့ဖြင့် အပူဒဏ် ကာကွယ်ပေးဖို့ သတိပေး နေချိန်တွင် လယ်ထဲကိုင်းထဲ အလုပ်လုပ်ကြ ရသော တောသူ တောင်သား များအား မည်သို့ကာကွယ် ပေးရမည်နည်း၊ စိတ်ပူပန်ရန် မလိုပါ။ ရှေးဘိုးစဉ် ဘောင်ဆက် ကပင် တောသူ တောင်သားတို့တွင် နေပူဒဏ် ကာကွယ်နည်း ရှိပါသည်။ အကာအကွယ် ရှိပါသည်။ ထို အကာအကွယ်မှာ သနပ်ခါး ဘဲကျား ထူထူလိမ်းခြင်း နှင့် ဝါးခမောက် တို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ရိုးရာ သနပ်ခါးသည် မျက်နှာနှင့် လက်ခြေ များပါ လိမ်းထားလျှင် နေပူဒဏ် (ခေတ်အခေါ် ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်ဒဏ်) သာမက လေတိုက်ပြီး အသားပပ်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်များ ကပ်ခြင်းကိုပါ ကာကွယ်သည်။ သနပ်ခါး အမြစ်တွင် အအေးဓာတ် (သီတဓာတ်) ပါသဖြင့် အပူကန်ပြီး မိတ်ဖုများ ထွက်ခြင်းကိုပါ အကာ အကွယ် ပေးသည်။ ရှေးကလူကြီး များသည် ကလေးများ ကို ရေမိုးချိုးပြီး သည်နှင့် ကျောက်ပျဉ်တွင် သနပ်ခါး သွေးပြီး လိမ်းပေးသည်။ လိမ်းပေးရုံ သာမက သန့်ရှင်းသော ရေဖြင့် သွေးထားသော သနပ်ခါး အနည်းငယ် ကို ကလေး၏ ပါးစပ် အတွင်းသို့ ခွံ့ပေးသည်။ ကလေး ငယ်များသည် စ၍ခွံ့ပေး ခါစက သနပ်ခါးသည် ခါးသက်သက် အရသာ ရှိသဖြင့် မကြိုက်သော်လည်း နောင်တွင် ကြိုက်သွားလေ့ ရှိသည်။ သနပ်ခါး စားခြင်းသည် အပူဒဏ် ကာကွယ်သည့် အပြင် ကလေးငယ် များကို ရေကျောက်နှင့် ဝက်သက် ပေါက်ခြင်းများ မှလည်း အကာအကွယ် ပေးနိုင်သည်။
ကန်စွန်းရွက် သည် ရာသီမရွေး ရနိုင်သော အစာ ဖြစ်သည်။ နွေအခါ ကုန်းကန်စွန်း၊ မိုးအခါ ရေကန်စွန်း စသည်ဖြင့် ပေါပေါများများ ရနိုင်သည်။ ကန်စွန်းရွက် ကို နေ့စဉ် စားခြင်းဖြင့် အပူဒဏ်မှ ကာကွယ်နိုင်သည်။ ကန်စွန်းရွက် သည် အဆုတ် အားကောင်း စေသည့် အာပေါစာ ဖြစ်သည်။ နွေရာသီ အပူငုပ်၍ ချောင်းခြောက် ဆိုးခြင်း၊ အသံဝင်ခြင်းကို သက်သာ စေနိုင်သည်။ ကန်စွန်းရွက် ကို မန်ကျည်းမှည့် နှင့် ချဉ်ရည်ဟင်း ချက်စားလျှင် အပူဒဏ်မှ ကာကွယ်သော ရာသီစာ ဖြစ်သည်။ မိတ်ထွက်ပြီး ပူစပ်ပူလောင် ဖြစ်လျှင် ကန်စွန်းရွက် အရည်ညှစ်ပြီး ဆားအနည်းငယ် ထည့်၍ ဖျော်လိမ်းပေး လျှင် သက်သာ စေနိုင်သည်။ နေပူဒဏ် ကာကွယ်ဖို့-
မိတ်ထွက်လျှင် သနပ်ခါး အနည်းငယ် စားပေးပါ။
ရတစ်ခွက် သောက်ပြီးမှ အပြင်ထွက်ပါ။
အပြင်မှ ပြန်လာလျှင် ရေခဲရေ မသောက်ပါနှင့်။
ခါင်းမူး၊ ခေါင်းချွေးပြန်လျှင် သံပရာရည် မသောက်ပါနှင့်။
ဦးခေါင်းဆံပင် ဖြန့်၍ ပန်ကာလေ မခံပါနှင့်။
ရခဲသေတ္တာထဲမှ ရေဘူးကို သောက်လိုလျှင် အပြင်မှာ ၁၅ မိနစ်ခန့် ထုတ်ထားပြီးမှ သောက်ပါ။
ဝမ်းချုပ်လျှင် ညအိပ်ရာဝင် မန်ကျည်းမှည့် နှင့် ထန်းလျက် ဖျော်ရည် သောက်ပါ။
ဝမ်းပျက်လျှင် သကြားသုံးဇွန်း၊ ဆားတစ်ဇွန်း၊ လက်ဖက်ခြောက် လက်တစ်ဆုပ် သံဒယ်အိုးဖြင့် လှော်ပြီး ရေနွေးဆူဆူ တွင် ခတ်သောက်ပါ။ ဝမ်းအရည် သွားခြင်းကို ရပ်စေပါသည်။
နေပူထဲထွက်ပြီး အလုပ်လုပ်ရာမှ ပြန်လာသူများ အထူး သတိပြုရန်မှာ ချက်ချင်း ရေအေးဖြင့် မျက်နှာသစ်ခြင်း၊ ခြေထောက် ဆေးခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။ ထိုသို့ ပြုလုပ်လျှင် ကြွက်သားများမှ အပူအအေး ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ပြီး လေဖြတ်နိုင်သည်။ ခေတ္တနား နေပြီးမှသာ ရေအေး သောက်ခြင်း၊ အဝတ်အစား လဲလှယ်ခြင်း၊ ခြေဆေးခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းများ ပြုလုပ်သင့်သည်။ အပူအအေး ကွာခြားချိန်မှာ တစ်နာရီခန့် အချိန်ယူ သင့်သည်။
ပူပြင်းသော ရာသီတွင် နေပူထဲ ထွက်ခြင်း၊ ကားစီးသော အခါတွင် လေလုံ၍ ကားအင်ဂျင်မှ ထွက်သော အပူရှိန်၊ ဘတ်စ်ကားများ အတွင်းတွင် လူများ ကျပ်တည်း၍ အပူရှိန် တိုးလာခြင်း တို့ကြောင့် ခေါင်းမူးခြင်း၊ သွေးတိုးအခံ ရှိသူများတွင် သွေးပေါင်ချိန် တက်ခြင်း၊ အပူဒဏ်ခံ ရသည့် နာရီကြာမြင့် သည့်အခါ ဦးနှောက် သွေးကြောများ အထိ အပူရှိန် တက်ကာ Heat Stroke ခေါ် အပူရှပ်၍ လေဖြတ်ခြင်း၊ ဦးနှောက်သွေးကြော ပေါက်ခြင်းအထိ ဖြစ်နိုင်သည်ကို သတိပြု ဆင်ခြင် သင့်သည်။
နေပူပြင်းသည့် ဒဏ်ကို ကာကွယ်သည့် အနေဖြင့် ချည်ထည်များ ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်လျှင် နေအိမ်ပြင်ပ သို့ မထွက်ဘဲ နေခြင်း၊ ပြင်ပသို့ သွားစရာရှိလျှင် နံနက်စောစော နှင့် ညနေ နေအေးချိန် တွင်သာ သွားလာခြင်း၊ သစ်ရိပ်ဝါးရိပ် များသည် အပူဒဏ်မှ ကာကွယ်နိုင် သဖြင့် အရိပ်ရှိသော နေရာတွင် သွားရောက် နေထိုင်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့် သက်ကြီးရွယ်အို များကို အပူဒဏ်မှ ကာကွယ် နိုင်သည့် နေရာများတွင် ရွှေ့ပြောင်းထား ရှိခြင်း၊ သဘာဝလေ တိုက်ခတ်သည့် နေရာ၊ ရေကန်၊ မြစ်ချောင်းအနီး အနားများတွင် နေထိုင်သင့်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရ ပေသည်။
မိုးသောက်ပန်းဂျာနယ် အတွဲ(၂၀) အမှတ်(၁၂)
AuroraJournal(20-12) by TheMyawadyDaily on Scribd
ရွှေတိဂုံစေတီတော် ၌ ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ငွေလှူဒါန်းခြင်းကို ခွင့်မပြုသေးဘဲ ပုံးအတွင်းထည့်သွင်းခြင်း ဖြင့်သာ လှူဒါန်းနိုင်
ရန်ကုန် ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၆
ရွှေတိဂုံ စေတီတော်ကြီး၌ Digital စနစ်ကို အသုံးပြု၍ ငွေလှူဒါန်းသည့် စနစ်အား ခွင့်မပြုသေးဘဲ ပုံးအတွင်း ထည့်သွင်းခြင်း ဖြင့်သာ လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း အဆိုပါ စေတီတော် ဂေါပကအဖွဲ့ ရုံးအဖွဲ့မှူး ဦးထွန်းအောင်ငွေ ထံမှ သိရသည်။
''အခုထိတော့ Digital စနစ်နဲ့ ငွေလှူဒါန်းတာကို ခွင့်မပြုသေး ပါဘူး။ အင်တာနက်ကနေ လှူဒါန်းတာ ကိုလည်း လောလောဆယ်မှာ မလုပ်နိုင်သေး ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ အလှူငွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာရင်းစစ် တွေရဲ့ စစ်ဆေးမှုကိုလည်း ခံယူရပါတယ်။ Digital စနစ်ကတော့ စာရင်းစစ်တွေ စစ်ဆေးဖို့ အခက်အခဲ ရှိနိုင်တာကြောင့် လောလောဆယ် ဒီစနစ်နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး'' ဟု ဦးထွန်းအောင်ငွေ က ပြောသည်။
ယခုအခါ In Mai Kha Technologies Co.,Ltd. က ရေးဆွဲလှူဒါန်း ထားသော Application ဖန်တီးမှုဖြင့် ဘားကုတ် အသုံးပြုသည့် Digital စနစ်ကို တည်နေရာ သိရှိစေရန်သာ သုံးစွဲလျက်ရှိပြီး ဘားကုတ်များကို ရင်ပြင်တော်ရှိ တန်ဆောင်းတချို့၌ ထောင်ထားကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိ အွန်လိုင်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍လည်း WiFi free ထုတ်လွှင့် ပေးလျက်ရှိသည်။
Digital စနစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ''ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အနေနဲ့ တစ်ချိန်မှာ Digital စနစ်ကို သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု တချို့နေရာတွေမှာ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် သုံးနေပါပြီ။ ဒီစနစ်က လုပ်ငန်း လျင်မြန်အောင် အကူအညီ ပေးရာ ရောက်တဲ့အပြင် လုံခြုံမှုစနစ်လည်း ကောင်းမွန်လို့ ကျင့်သုံး လာတာတွေ ရှိနေပါတယ်'' ဟု ဦးထွန်းအောင်ငွေ က ဆက်လက် ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့၌ မြို့ပြမြေအသုံးချမှုဇုန် မူကြမ်းကို ဥပဒေတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်
ရန်ကုန်မြို့၌ မြို့ပြမြေ အသုံးချမှုဇုန် မူကြမ်းကို လတ်တလော တွင် ဥပဒေတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်လာ စေရန် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီ မြို့ပြစီမံကိန်း နှင့် မြေစီမံ ခန့်ခွဲရေး ဌာနမှ သိရသည်။
မြို့ပြမြေ အသုံးချမှုဇုန် မူကြမ်းကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင် သာယာရေး ကော်မတီက ဦးဆောင်၍ ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေး ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းနှင့် မြို့ပြ စီမံကိန်း ပညာရှင်များ ညှိနှိုင်းရေးဆွဲ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ မြို့ပြမြေ အသုံးချမှုဇုန် မူကြမ်းတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက် အရ မြို့ဧရိယာ၏ ၃၅ ရာခိုင်နှုန်း ကိုသာ အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံ များနှင့် လူနေအိမ်များ ဆောက်လုပ်ရန် သတ်မှတ်ထားပြီး မြို့နယ်အလိုက် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်မှု ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၊ စိမ်းလန်း ဧရိယာများ နှင့် စက်မှုဇုန် များကို ဇုန်များ ခွဲခြားကာ သီးသန့် သတ်မှတ် ထားကြောင်း သိရသည်။
မြို့ပြမြေ အသုံးချမှုဇုန် ကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြုပြီး ပါက အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရာတွင် ဥပဒေ ပါပြဋ္ဌာန်းထားချက် များအတိုင်း တည်ဆောက်ခွင့် ရရှိတော့မည် ဖြစ်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အတည်ဖြစ်လာ ပါက အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မှု များတွင် စံချိန်စံညွှန်း မြင့်လာနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Labels: မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး, ရန်ကုန်သတင်း
လက်ကိုင်ဖုန်းတိုင်းကို ဖွင့်ဖတ်နိုင်သော နည်းပညာကို အစ္စရေး အသုံးပြုလျက်ရှိ
တဲလ်အဗစ် ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၆
အစ္စရေးနိုင်ငံ အခြေစိုက် Cellebrite နည်းပညာ ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်ဖုန်းကို ဖြစ်စေ ဖွင့်ဖတ် ကြည့်ရှုခြင်း၊ အချက်အလက်များ ကူးယူခြင်း အစရှိသည် တို့ ကို ပြုလုပ်နိုင်သော အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာ တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ထားပြီး အောင်မြင်စွာ စမ်းသပ် အသုံးပြုလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
Cellebrite သည် ယခုနှစ် အစောပိုင်း ကလည်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ FBI ကို ဗုံးဖောက်ခွဲရေး သမား တစ်ဦး၏ iPhone ကို ဖွင့်ဖတ် နိုင်အောင် ကူညီပေးခဲ့ ရာမှ ကမ္ဘာကျော် လာခဲ့ပြီး ယခုလည်း ခေတ်မီ နည်းစနစ် များဖြင့် လုံခြုံရေး အပြည့်အ၀ ပြုလုပ်ထားသော မည်သည့် စမတ်ဖုန်း၊ မော်ဒန်း၊ ၀ိုင်ဖိုင် ကိရိယာဖြစ်စေ၊ ဖွင့်နိုင်၊ ၀င်နိုင်၊ ထွက်နိုင်၊ ကြည့်ရှု ကူးယူနိုင်မည့် ကိရိယာကို ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး Cellebrite ဟု ပင် အမည်ပေး ထားကြောင်း သိရသည်။
Cellebrite သည် ၄င်း၏ ကိရိယာအား လက်တွေ့ စမ်းပြခဲ့ကြောင်း၊ မင်္သကာသော လက်ကိုင်ဖုန်း များမှ အချက်အလက် များကို Cellebite က ကူးယူကြောင်း၊ ထို့ နောက် ၄င်းဖုန်းများနှင့် ဆက်သွယ်လေ့ ရှိသော ဖုန်းနံပါတ် များကို ဖော်ပြပေး နိုင်ကြောင်း၊ Samsung ဖုန်းများကို အလွယ်တကူ ပင် ၀င်ရောက်ပြ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
" ကျွန်တော့် Samsung ဟန်းဆက်ကို ယူပြီး Cellebrite နဲ့ချိတ်လိုက်တာပဲ။ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်သလိုပဲပေါ့။ ပြီးတာနဲ့Cellebrite ပေါ်က ခလုပ်တစ်ချို့ ကိုနှိပ်လိုက်တာ ကျွန်တော့် ဖုန်းစကရင်ကို ခတ်ထားတဲ့ password က ပျက်သွား တယ်။ ပြီးတာနဲ့ဖုန်းထဲက အချက်အလက် တွေအားလုံးကို ကူးပြတယ်။ အထဲက folder lock တွေကိုပါ ဖွင့်နိုင်တာကို တွေ့ ရတယ်။ ကျွန်တော့်ဖုန်း ထဲက ဓာတ်ပုံတွေ၊ အချက်အလက် တွေကို USB နဲ့ကူးပြတယ်။ အားလုံးဟာ ရှောရှောရူရူပဲ။ ဘာမှ အထစ်အငေါ့ မရှိဘူး " ဟု Samsung ဟန်းဆက်ကို လက်တွေ့ စမ်းသပ်ခဲ့သူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အစ္စရေး ရဲတပ်ဖွဲ့ က Cellebrite ကို အသုံးပြုကာ မင်္သာသော လက်ကိုင်ဖုန်း များကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနေ သည်ကို တွေ့ ရှိရကြောင်း၊ Cellebrite ကို နိုင်ငံတကာ အစိုးရများထံ ရောင်းချသွားဖွယ် ရှိကြောင်း၊ သို့ သော် Cellebrite အနေဖြင့် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်သော အစိုးရများကို ၄င်း၏ ဖုန်းဖတ် ကိရိယာအား ရောင်းချသွားရန် အစီအစဉ်ရှိမည် မထင်ကြောင်း လေ့လာ စောင့်ကြည့်သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံ မှားယွင်းမှုကြောင့် အမျိုးသားကျန်းမာရေး အသုံးစရိတ် ၁၁ ဘီလီယံ စတာလင်ပေါင် ပို၍ကုန်ကျနေ
လန်ဒန် ၊ ၂၇-၉-၂၀၁၆
အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် လူအများ၏ နေထိုင် စားသောက်မှုပုံစံ မှားယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျန်းမာရေး ပြဿနာများကို နှစ်စဉ် စတာလင်ပေါင် ၁၁ ဘီလီယံထက် မနည်း အကုန်အကျခံကာ ကုသပေးနေ ရကြောင်း အမျိုးသား ကျန်းမာရေးဌာန NHS က ထုတ်ပြန် ကြေညာသည်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသား များသည် အစားအသောက် ရွေးချယ်မှု မမှန်ကန်ခြင်း၊ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်း၊ ဆေးလိပ် သောက်ခြင်း အစရှိသည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်သော စားသောက်မှုပုံစံ နှင့် ညအိပ်စက်ချိန် အပြည့်အ၀ မရရှိခြင်း၊ ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု အားနည်းခြင်း အစရှိသည့် နေထိုင် စားသောက်မှုပုံစံ မှားယွင်းနေခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ယင်းမှားယွင်းမှုကို အမျိုးသားရေး စိတ်ဓာတ်ဖြင့် မပြုပြင်ကြ ပါက လာမည့် နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အသုံးစရိတ်မှာ လောက်င တော့မည် မဟုတ်ကြောင်း NHS မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
" အင်္ဂလန်မှာ ဆီးချိုရောဂါနဲ့ဆေးလိပ် သောက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားသော လေပြွန်ရောင် ရောဂါ တွေဆိုတာ တားမနိုင် ဆီးမရ ကူးစက်ရောဂါ သဖွယ် အဖြစ်များ နေပါတယ်။ ဥပမာ Fleetwood, Lancashire လိုမြို့ တွေမှာ လူ ၁၀ ယောက်မှာ ၄ ယောက်နှုန်းဟာ ကုရာနတ္တိ ဆေးမရှိတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါ တွေကို ခံစားနေကြ ရပါတယ်။ သူတို့ တွေ ဆိုတာ NHS အနေနဲ့ရေရှည်စောင့်ရှောက် ကုသပေး ရတော့မယ့် လူနာတွေ ဖြစ်ပါတယ် " ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ပြော ပြသည်။
" ၀ိတိုရိယ ဘုရင်မခေတ်ကို ပြန် လှမ်းမျှော်ကြည့်မယ် ဆိုရင် အဲဒီတုန်းက ပိုလီယိုရောဂါကို ဘယ်လိုများ ကာကွယ်ရမလဲ လို့ တွေးပူခဲ့ရ ပါတယ်။ အခု ပိုလီယိုကို ကျွန်တော်တို့ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအင်္ဂလန်မှာ ဖြစ်နေတာ က ကူးစက်ရောဂါ မဟုတ်ဘဲ လူတွေရဲ့ နေထိုင်မှုနဲ့ စားသောက်မှုပုံစံ မှားယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် ချင်းစီက အဲဒီလူနေထိုင်မှုနဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကို မိမိ အသိစိတ်ဓာတ် နဲ့ပြုပြင်လိုက်မယ် ဆိုရင် နိုင်ငံအတွက် ကုန်ကျနေတဲ့ ကြီးလေးတဲ့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်စရိတ် ကို အခြား ပိုအကျိုးရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးစွဲနိုင်မှာ ဖြစ်သလို တစ်မျိုးသားလုံး ကျန်းမာရေးလည်း ပြန်ပြီးတိုးတက် ကောင်းမွန် လာနိုင်ပါတယ် ဓ ဟု NHS မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
အင်္ဂလန်တွင် နေထိုင် စားသောက်မှုပုံစံ မှားယွင်းနေသော မြို့ များ၌ လူ့ ဘ၀သက်တမ်း သည် ကျန်းမာသော မြို့ များတွင် နေထိုင်သူများ၏ လူ့ ဘ၀သက်တမ်း နှင့်နှိုင်းလျှင် အသက် ခြောက်နှစ်ထက် မနည်း တိုနေပြီ ဖြစ်သည့်အတွက် လူနေထိုင်မှုနှင့် စားသောက်မှုပုံစံကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ရန် လိုအပ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာလမှစ၍ ချောင်းသာကမ်းခြေ၌ ဆိုင်ကယ်နှင့် လေးဘီးစက်တပ်ယာဉ်များ စီးနင်းခြင်းကို တားမြစ်သွားမည်
ပုသိမ် ၊ ၂၆-၉-၂၀၁၆
လာမည့် ပွင့်လင်းရာသီ ဖြစ်သော အောက်တိုဘာလ မှစ၍ ချောင်းသာ ကမ်းခြေ၌ ကမ်းခြေ သာယာလှပ ရေးနှင့် အပန်းဖြေ သူများ အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရေး အတွက် ဆိုင်ကယ်နှင့် လေးဘီး စက်တပ်ယာဉ်များ စီးနင်းခြင်း တို့ကို တားမြစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ချောင်းသာ ဟိုတယ်ဇုန် အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းကျော်ဦး ထံမှ သိရသည်။
ကမ်းခြေ၌ ဆိုင်ကယ်စီးခြင်း၊ လေးဘီး စက်တပ်ယာဉ် စီးခြင်းတို့ကို တားမြစ်မည့် အပြင် ကမ်းခြေ၌ ထိုင်ခုံများချကာ ဈေးရောင်းချခြင်း နှင့် အရက်သေစာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ရောင်းချခြင်း တို့သည်လည်း ကမ်းခြေ အလှအပကို ထိခိုက်စေပြီး အများ ပြည်သူအား အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေ၍ တားမြစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ဆိုင်ကယ်တွေ၊ လေးဘီး စက်တပ်ယာဉ် တွေက အများပြည်သူ အပန်းဖြေမှုကို ထိခိုက် စေတဲ့အတွက် ကမ်းခြေမှာ စီးနင်းခွင့် ပေးတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြင်းစီးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့လည်း ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ခွင့်ပြု
သွားမလဲဆိုတာ ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ စက်ဘီးကတော့ စီးခွင့်ပေးသွား မှာပါ။ ခေါင်းရွက်ဗျပ်ထိုး ဈေးသည်တွေ၊ အထမ်းနဲ့ ရောင်းတဲ့ ဈေးသည်တွေ ကလွဲရင် တခြား ဈေးသည် အားလုံးကို ရောင်းချခွင့် ပြုမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အရက်၊ ဘီယာ၊ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချတာ တွေကို လည်း အဓိက တားမြစ်သွား မှာပါ'' ဟု ဦးမင်းကျော်ဦး ကပြောသည်။
စက်တင်ဘာလ တတိယပတ် အတွင်းက ချောင်းသာကမ်းခြေ သာယာလှပရေး နှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို သုံးရက်ကြာ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့ မှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ တိုင်းလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပုဂ္ဂလိက လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ဟိုတယ်ဇုန်မှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး များနှင့် ဒေသခံ ပြည်သူများ တက်ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။ (၄၄၇)
ပြည်တွင်း၌ ကလေးလုပ်သား ပပျောက်ရေးကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေ
ပြည်တွင်း၌ စီးပွားရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာခြင်း နှင့်အတူ ကလေးလုပ်သား ပပျောက်ရေး ကိုလည်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်နှင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး အဖွဲ့များက တိုက်တွန်း ထားကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ငါးနှစ်တာ ကာလအတွင်း ပြည်တွင်း၌ စီးပွားရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာပြီး အခကြေးငွေ ပေးရာတွင် သက်သာသည့် ကလေးလုပ်သားများ အသုံးပြုမှု များလည်း မြင့်တက် လာသည်ဟု သတိပေးမှုများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ကလေးလုပ်သား ပပျောက်ရေး အတွက် ဖော်ဆောင်မည့် သဘော တူညီမှုများကို လက်မှတ် ရေးထိုးရန် စီစဉ်ပြီး ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ အလုပ်သမား ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ လက်တွေ့ကျင့်သုံး ဆောင်ရွက် ရာတွင် အားနည်းချက်များ ရှိနေခြင်း၊ ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မှု အားနည်းခြင်းနှင့် အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် လိုအပ်ချက်များ ရှိနေခြင်းတို့ တွေ့ကြုံလျက် ရှိပြီး ကလေးလုပ်သား ပပျောက်ရေး စီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်ရာတွင် အဆိုပါ အားနည်းချက် များကို လျှော့ချနိုင်ရန် အလေးပေး ဆောင်ရွက် သင့်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမား အဖွဲ့ချုပ်သည် ကလေးလုပ်သား လျှော့ချရေး စီမံကိန်းများ ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပညာသင်ကြား နိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကလေးလုပ်သား များအား ပညာသင်ကြား နိုင်မည့် အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက် ပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း သိရသည်။